१६ बर्षे किशोरी मन्त्री बनिन्  OnlineKhabar
१६ बर्षे किशोरी मन्त्री बनिन्
तपाई एक दिनका लागि मन्त्री बन्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ ? भारतीय सिनेमा नायक हेरेका नेपाली दर्शकहरुले एक दिनमै अनिल कपुरको जस्तो नायकीपन देखाउने कल्पना गर्छन । यो काल्पनिक प्रश्न हालै प्यालेष्टाइनमा वास्तविकता बन्यो ।
प्यालेस्टाइनमा १६ वर्षीया युवती मन्त्री बनेकी छिन् । जम्माजम्मी एक दिन कुर्सीमा बसेकी उनले राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनलाई पत्र लेखेर प्यालेष्टाइनीका समस्याबारे लविङ पनि गरिन् ।
त्यहाँका स्थानीय प्रशासनमन्त्रीले ती किशोरीलाई मन्त्री बन्ने अबसर दिएका थिए । प्यालेस्टायनी पत्रिका अल कुदुसका अनुसार बशाएर ओथमन एक दिनका लागि मन्त्री बनेकी हुन् ।
प्यालेस्टायनी प्राधिकरण सरकारमा एक दिनका स्थानीय प्रशासन मन्त्री बनेकी उनले राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनसमक्ष स्थानीय मुद्दा राखेकी छिन् । स्थानीय प्रशासन मन्त्री सईद अल कावनीले बशीर ओथमनलाई उनको जन्मदिनको अबसरमा मन्त्री बन्ने मौका दिएका थिए । ओथम गत वर्ष २ महिनाका लागि आफ्नो गृह क्षेत्र एल्लारको मेयर समेत भएकी थिइन् ।
१६ वर्षीया किशोरीलाई एक दिनका लागि मन्त्री बनाएका मन्त्री कावनीले भनेका छन्–‘यो अनुभव प्यालेस्टायनी नौजवानका लागि राम्रो उदाहरण र आदर्श बनेको छ । म चाहन्छु कि नौजवान अगाडि आएर ठूला जिम्मेवारी निभाउन ।’
बशाएर युवाहरुका लागि एक फोरम चलाउँछिन् । उनी भन्छिन –‘प्यालेस्टायनी राष्ट्र निर्माणमा युवाको सहभागिताका लागि काम गरिरहने छु ।’ समाचारमा जनाइएअनुसार राष्ट्रसंघका महासचिव मुनलाई लेखेको पत्रमा वशायरले प्यालेस्टायनीहरुले भोग्नु परेको समस्याबारे उल्लेख गरेकी छिन् ।
२०७० भदौ १७ गते ४:३९ मा प्रकाशित
यी हुन् अन्तिम पटक खिचिएका सेलिब्रेटीका चर्चित तस्वीरहरु (फोटोफिचर)
मलेसियामा ‘हराएका’ जीवन १४ वर्षपछि आफन्तको सम्पर्कमा
ब्रोकन चर्चः मकाउको पर्यटक लठ्याउने गन्तव्य (तस्वीर सहित)
वाम एकताबारे उपेन्द्र यादवः कमाउनिष्टहरुसँग किन आत्तिने ? (भिडियोसहित)
छ वटा प्याराग्लाइडर फेवातालमा खसे, सबै सकुशल
आमा बनेपछि फेरिएकी रेजिना